असारे विकास या बजेट कुम्ल्याउने धन्दा ! – Everest Dainik – News from Nepal
असारे विकास या बजेट कुम्ल्याउने धन्दा !
जब जब आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन थाल्छ, तब सडक निर्माण, ढल निकास, बाटो मर्मत, पुल निर्माण लगायत, विभिन्न विकास निर्माणका काम अघि बढाइन्छ ।
घाम लाग्दा धुलाम्मे, पानी पर्दा हिलाम्मे हुने यहाँको सडकको दुर्दशाप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिल्यै जाँदैन ।
एकातिर झमझम परेको पानी, त्यहीमाथि विकासका नाममा गरिएको कामहरुले सर्वसाधारणले निकै सास्ती भोग्नु पर्छ । घाम लाग्दा धुलाम्मे, पानी पर्दा हिलाम्मे हुने यहाँको सडकको दुर्दशाप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिल्यै जाँदैन । कही बाटो खन्दैछ बीचमै अलपत्र पारिदिएको छ, कही ग्राबेल ओच्छ्याइएको छ, त्यो पनि बीचमै छोडिन्छ, कही पिच गरेको छ त्यो पनि बीचमै छोडिन्छ । यहाँसम्म की जनतालाई खानेपानीको सुविधा दिनका लागि जमिनमुखि खनेर पाइप ओच्छ्रयाएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि त्यो पाइपमा पानी आउँदैन, जनताले सहज खानेपानी पाउन सक्दैनन् ।
कही बाटो खन्दैछ बीचमै अलपत्र पारिदिएको छ, कही ग्राबेल ओच्छ्याइएको छ, त्यो पनि बीचमै छोडिन्छ, कही पिच गरेको छ त्यो पनि बीचमै छोडिन्छ ।
जनताको सास्ती देख्दैन सम्बन्धित निकायले जनताको आवाज सुन्दैन उसले । उसोतः नेपाल राज्य मात्रै होइन छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत मानिसहरु राजधानी काठमाडौंमा आई यहाँ बसोबास गरेका छन् । कही खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन, कही स्वच्छ हावा पाइँदैन, हरियाली भनेको घरको छतमा बाहेक अन्य ठाउँमा विरलै पाइन्छ । मानिसको संख्या यति छ कि बजार निस्कियो, त्यो भीडभाडले पाइला राख्ने ठाउँ हुँदैन, नीजि मोटरसाइकल वा गाडीमा हिड्यो पार्किङ गर्ने ठाउँ हुँदैन । सार्वजनिक भाडाको गाडी प्रयोग गर्यो बस्ने त परै जाओस भनेको बेला गाडी पाइँदैन, पाइहाले भित्र ठाउँ पाइँदैन, ढोकामा एक हातले समातेर झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्छ, त्यसमाथि अगतिलो बाटोका कारण दैनिक निर्दोष यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
मानिसको संख्या यति छ कि बजार निस्कियो, त्यो भीडभाडले पाइला राख्ने ठाउँ हुँदैन, नीजि मोटरसाइकल वा गाडीमा हिड्यो पार्किङ गर्ने ठाउँ हुँदैन ।
मानिसको संख्या पनि यति भैसक्यो कि जहाँ हेर्यो त्यही मान्छे नै मान्छे । हस्पिटल गयो सबै मान्छे त्यही भए जस्तो, फिल्म हेर्न गयो मानिसहरु सबैले फिल्म मात्रै हेर्छन जस्तो, प्रसुती गृह गयो कति बच्चा जन्मिए जस्तो, शवशान घाट गयो यति धेरै मान्छे मरे त अब के होला जस्तो ? जाने ठाउँ कही छैन, हेर्ने ठाउँ कही छैन, अझ बजार भाउले आकाश छुन लागिसक्यो । भाउ घटा भन्ने कोही छैन । सबै स्वार्थी सबैले आफ्नै दुनो सोझाउने काम मात्रै गर्छन् । त्यसमाथि सरकारले त झन लुट्नु लुटेको छ नेपाली जनतालाई ।
हरेक वर्षको बजेट भाषासँगै हरेक कुरामा मूल्यवृद्धि हुन्छ । वर्षेनी विकास खर्च, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, खेलकुद भन्दै काम रोजगारीसमेतलाई समेटी खर्बौमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । तर हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुन्छ । वर्षभरी विभिन्न शीर्षमा बजेट छुट्याई देशको विकास गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता हुन्छ । तर, केमा कसरी कुरा मिल्दैन र वर्षमा मात्रै एक महिना अलिअलि काम हुन्छ, बाँकी ११ महिना बजेटको रकमतिर ध्यान दिन सक्दैन सरकार ।
भनिन्छ, ‘कुम्भकर्ण पनि ६ महिना सुते, ६ महिना उठ्यो’ रे । तर नेपालका नेता मन्त्रीहरु ११ महिना कानमा तेल हालेर सुत्छन् । अनि आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा हतार हतारमा काम सुरु गर्न थाल्छन् । रातारात डोजर चलाइन्छ, रातारात बाटो पिच हुन्छ चाहे त्यो धुलोमाथि होस या हिलोमाथि । भइरहेको चिल्लो पीच पनि भत्काइन्छ, रकम निकासा नहुन्जेल पुनः पिच गर्दैआएपनि अन्तिममा त्यत्तिकै छोड्न पनि सक्छन् । टोलटोलमा खाल्डाखुल्टी पुर्नेदेखि रातारात पोल सारिन्छ । किनकी उक्त शिर्षकको बजेट पचाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यहाँ जे हुन्छ रातारात नै हुन्छ् । यही रफ्तारमा वर्ष भरी नै काम हुने हो भने नेपालले विकासको नाममा अग्रंगामी छलाङ मार्ने पक्का छ ।मुलुकले विकासको नाउमा अग्रगामी छलाङ मार्ने भनेकै जेठरअसार महिना हो । या त कुनै विदेशी विशिष्ट पाहुना आए पनि ।
भनिन्छ, ‘कुम्भकर्ण पनि ६ महिना सुते, ६ महिना उठ्यो’ रे । तर नेपालका नेता मन्त्रीहरु ११ महिना कानमा तेल हालेर सुत्छन् । अनि आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा हतार हतारमा काम सुरु गर्न थाल्छन् ।
यो एक सालको मात्रै कुरा भने होइन । जसको सरकार आएपनि बजेट सक्ने यो खेल निरन्तर चलिरहन्छ । विकासको उद्देश्यले भन्दा पनि बजेट पचाउने उदेश्यले संरचना निर्माण हुन्छन् । काम कति कसरी भयो भन्ने अनुगमन गर्ने वा गलत काम भए कडी लगाउने कोही छैन यहाँ । काम कति समयसम्मका लागि भयो रु टिकाउ कति वर्षका लागि भन्दा पनि बस काम भइरहेको छ या भयो । बजेट पचाउ चुप लाग बस । संरचना एक दुई महिनापछि भत्किन वा विग्रिन पनि सक्छ या बन्दाबन्दै । करोडौ खर्च गरेर असार मसान्तभित्र निर्माण गरिने उक्त बाटोको आयू कति हुन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन ।
कमिसन र घुसखोरीको जालोमा बेरिएको नेपालको राजनीतिमा विकासको नाउमा मन्त्री नेतादेखि ठेकेदारसम्म रमाउन पाउँछन् । जनता सँधैको दुःखी, संरचना निर्माण नहुँदा पनि, नगर्दा पनि । नेपाली जनताले खुन पसिना एक गरेर कमाएको पैसाले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ । नुन, तेल मसला खान नपाएर एक सरो गतिलो लुगा नफेरेर पनि सरकारलाई पाल्नुपर्छ जनताले ।
कमिसन र घुसखोरीको जालोमा बेरिएको नेपालको राजनीतिमा विकासको नाउमा मन्त्री नेतादेखि ठेकेदारसम्म रमाउन पाउँछन् । जनता सँधैको दुःखी, संरचना निर्माण नहुँदा पनि, नगर्दा पनि ।
त्यो प्रत्यक्ष होस वा अप्रत्यक्ष रुपमा जनताले नै जम्मा गरेको पैसामा नेताहरुले भने विकासको नाउमा वर्खे विकास गरेर जनताको पैसा स्वाहा बनाउँछन् ।
ट्याग्स: पुष्पा महरा